10 Fijanonana mahagaga any Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Fijanonana mahagaga any Eoropa
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 31/12/2021)
Fijery mahafinaritra, vohitra mistery, trano mimanda, ary trano tsy mahazatra, ireo 10 Ny fijanonana mahagaga any Eorôpa dia mety mitaky ny fanalavana ny fijanonanao, fa tena mendrika ny fitsidihana izy ireo.
1. Fijanonana mahagaga any Eoropa: Rakotzbrucke, Alemaina
Niafina tao amin'ny zaridaina kely iray any Saxony, ny Tetezan’ny Devoly, antsoina koa hoe Rakotzbrucke, dia mendrika tokoa ny dia sarotra avy any Berlin. Ny tetezana miolakolaka vato avy amin'ny 1860, dia fahitana manitikitika sy manitikitika ny mpandeha noho ny bika aman'endriny tsy manam-paharoa. Tilikambo maranitra amin'ny lafiny tsirairay ary ny tetezana miolakolaka, toa ny devoly mihitsy no nanao azy ireny, fa raha ny marina dia nataon'olombelona avokoa.
Ary, Ny tantara dia milaza fa ny lehilahy dia manao io tetezana io ho fanatitra ho an'ny devoly tamin'izany fotoana izany, fa amin'izao fotoana izao dia toerana mahagaga fotsiny. Tsy misy zavatra maro azo atao eo akaiky eo, noho izany dia tsara indrindra ny manambatra ny fitsidihana any Rakotzbrucke amin'ny dia mankany amin'ny zaridainan'i Kromlau.
2. Champagne-Ardenne, Frantsa
Lohasaha lonaka sy faravodilanitra misy tanimboaloboka sy divay fotsy. Noho izany, Ny fitsidihana Champagne-Ardenne dia mety ho fijanonana mahafinaritra amin'ny dianao mankany amin'ny Italiana faritra divay, Tuscany. Ny firenena champagne dia eo anelanelan'i Paris sy Lorraine. Ary noho izany, fijanonana amin'ny iray amin'ireo tanimboaloboka lehibe ao Champagne-Ardenne mety ho fanampin'ny a ankizivavy’ diany ho any Paris.
Fanampin'izany, ho tranon'ny champagne manjelanjelatra mirentirenty, manana dikany manan-tantara io faritra io. Ohatra, ny mahagaga Joan of Arc dia avy amin'ny tanàna Domremy. Noho izany, mety handre tantara mahagaga ianao rehefa manandrana divay ao amin'ny tanimboaloboka frantsay mahafinaritra. Andalana ambany, Champagne-Ardenne dia iray amin'ireo 5 fijanonana mahagaga indrindra any Frantsa.
3. Fijanonana mahagaga any Eoropa: Oberhofen Castle, Soisa
Eo amoron'ny farihy tsara lasitike, Oberhofen Castle dia iray amin'ireo lapa tsara tarehy any Soisa. Oberhofen Castle dia eo anelanelan'i Bern, Interlaken, ary Lake Lucerne. Noho izany, Ny fitsidihana ny Castle Oberhofen sy ny Lake Thun dia toerana fijanonana mahafinaritra amin'ny lalana lava tsara tarehy.
Ankoatry ny, Ny tranombakoka lasa lapa izay nanomboka tamin'ny taonjato faha-13 dia manana zaridaina mahafinaritra izay ahafahanao mankafy hazo hafakely maro., voninkazo, ary ny fomba fijery ny Alpes. Noho izany, azonao atao ny mamadika fitsangatsanganana antsasak'andro ho fitsangatsanganana andro feno mankany Oberhofen, ary ny zaridaina tsara tarehy teo akaiky teo mba hiaina ny fahatoniana mangina sy ny fomba fijery mahafinaritra, raha nirohotra nankany Lucerne kosa ny vahoaka.
4. Vorarlberg, Aotrisy
Tazana ny Farihy Constance tsara tarehy, Vorarlberg dia malaza amin'ny farihy mahafinaritra sy ny fomba fijery ny tendrombohitra. Ao am-pototry ny Vorarlberg dia tanàna ao amin'ny faritany mizaka tenan'i Aotrisy, ao Etazonia, mahafinaritra tahiry voajanahary ny tendrombohitra lehibe, ary lalana maitso. Na avy any Liechtenstein mankany Aotrisy na Alemaina ianao, Vorarlberg dia fijanonana mahagaga amin'ny dianao amin'ny lamasinina manerana an'i Eropa.
Sakafo maraina an-tendrombohitra, na faran'ny herinandro mangina amin'ny natiora alohan'ny tanàna be atao, tokony hanokana fotoana ho an'i Vorarlberg ianao. Tsy dia fantatry ny mpandeha loatra ity tanàna ity, na izany aza, Vorarlberg no toerana ahafahanao miaina ny kolontsaina sy ny sakafo Austrian. Ary, ho voahodidin'ny tanin'ny Aotrisy manaitra indrindra ianao, tanàna, ary fomba fijery mahafinaritra – ny tsara indrindra any Aotrisy atolotra, lavitra ny toerana fizahan-tany.
5. Fijanonana mahagaga any Eoropa: Freudenberg, Alemaina
Iray amin'ireo tanànan'i Alemaina ny tanànan'i Freudenberg tamin'ny Moyen Âge, ary ny tanàna tsara tarehy indrindra any Eoropa. Ny tena mahasarika eto dia 80 na trano fotsy voaravaka hazo, mijery tsara indrindra amin'ny ririnina. Noho izany, fitsangatsanganana mankany Freudenberg rakotra lanezy dia an traikefa tsy hay hadinoina, iray izay hitondra anao hiverina amin'ny fotoana sy ho any amin'ny tanin'ny angano.
Ary, Eo amin'ireo havoana maitso no misy an'i Freudenberg, amin'ny 160 km ny tongotra lavitra lalana ary fomba fijery mahafinaritra. Ny faritra Westphalia dia mahafinaritra amin'ny lohataona rehefa maitso sy mamony ny zava-drehetra. The 6 ora fiaran-dalamby avy any Berlin dia mendrika izany, for a glimpse of one of the most tanàna tranainy mahafinaritra tany Alemaina.
6. Giant's Causeway, Irlandy Avaratra
Ny fijerin'ny over 40,000 Ny tsanganana basalt hexagonal midina any amin'ny ranomasina manga ao amin'ny Giant's Causeway dia tena mahafinaritra.. Ny zava-mahagaga voajanahary dia mihoatra ny 6o tapitrisa taona, azo tratrarina amin'ny alàlan'ny maitso, MENA, ary lalana manga. Noho ny endriny miavaka, Ireo tsanganana ireo dia mametraka ny Lalana Giant miaraka amin'ny 7 zava-mahagaga hafa izao tontolo izao.
Ary noho izany, tsy ilaina ny milaza izany, Ny Lalan'ny Giant dia iray amin'ireo 10 fijanonana mahafinaritra indrindra atao any Irlandy. Na avy any Belfast na Dublin ianao, omeo fotoana hanaovana izany andro mahafinaritra any Irlandy Avaratra. Voahodidin'ny tany irlandey maitso mavana, ary ny ranomasina manga eo an-tongony, Ny dingana rehetra manaraka ireto tsanganana volkano ireto dia hitondra anao hanakaiky kokoa ny dianao hahitanao ny tsara indrindra sy miavaka indrindra eto an-tany.
7. Fijanonana mahagaga any Eoropa: Zermatt, Soisa
Ny Alpes lehibe dia midadasika ka izay toerana tianao hijanonana dia hanala ny ainao. Na izany aza, tsy misy tahaka ny fomba fijery mahagaga ny Nanketo Alpes eto Soisa any Zermatt. Na dia malaza amin'ny tehezan-tendrombohitra manao ski aza i Zermatt, tsara tarehy izy io amin'ny lohataona sy ny fahavaratra.
Zermatt dia fonenan'ny iray amin'ireo ny tandavan-tendrombohitra mahafinaritra indrindra any Eoropa, Matterhorn. Raha toa ka mijoalajoala sy lavitra ny tratra, Ny hatsaran-tarehin'i Zermatt dia fiarandalamby miala an'i Basel, Bern, ary Genève. Noho izany, afaka tonga amin'ny faran'ny herinandro ianao na manalava ny fijanonanao fohy amin'ny fialantsasatra tsy hay hadinoina any amin'ny Alpes Soisa.
Ho babon'ny Trulli tsy mahazatra ianao, ao amin'ny faritra Salento mahavariana. Trano kônônika misy tafo fotsy sy tafo voahaingo dia efa tamin'ny vanim-potoanan'ny Bronze. Noheverina ho vonjimaika ireny trano tsy manam-paharoa ireny, fa maro no tafavoaka velona amin'ny fotoana sy ny toetr'andro, ao amin'ny tanàna mahafinaritra Alberobello. Alberobello dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any atsimon'i Italia, ary fijanonana lehibe manamorona ny morontsiraka italiana.
Raha mbola kely ity tanàna ity, Afaka mandeha mora foana mankany amin'ny faritra Alberobello sy Trulli ianao amin'ny fiaran-dalamby. Atỳ, azonao atao ny mijanona vitsivitsy any amin'ireo tanàna mahafinaritra hafa, toy ny Lecce fahiny, amoron-dranomasina bari, ary Trany. Ankoatry ny, kely ireny tanàna mahafinaritra ireny lalana tsy voavono any Italia ary tsy misy vahoaka mpizahatany.
9. Fijanonana mahagaga any Eoropa: Beaulieu-Sur-Mer Village, Frantsa
Eo anelanelan'i Monaco sy Nice, ao amin'ny Riviera frantsay mahavariana, Beaulieu-sur-Mer dia toerana mahafinaritra hijanonana eny amoron-dranomasina ary hitsambikina milomano ao amin'ny Ranomasina Mediterane.. Tora-pasika manokana, villa mirentirenty, ary ny fomba fijery mahafinaritra ny saikinosy Saint-Jean-Cap-Ferrat, tsy mahazo nofinofy kokoa noho izany any Eoropa izany.
Ankoatra ny Beaulieu-sur-Mer, misy fijanonana manaitra maro manamorona ny Les Corniches, ny lalana hantsana manamorona ny Riviera frantsay. Ny fiara 30 km dia manomboka any Nice ary mifarana any Menton, iray amin'ny ny toerana maro loko indrindra any Eoropa. Raha 30-km ihany, misy farafaharatsiny 10 fijanonana mahagaga manamorona ity lalana mahafinaritra any Eoropa ity.
10. Giethoorn, ny Pays-Bas
Ny tany misy trano fambolena bozaka sy 170 nosy, Giethoorn is a tanàna mistery any Holandy. Ary, mitondra ny lakandrano, ambanin'ny tetezana hazo, voahodidina tany maitso sy voninkazo, dia traikefa tsy hohadinoinao.
Ny tanàna kely mahafatifaty Giethoorn ao amin'ny valan-javaboary Weerribben-Wieden dia fijanonana mahagaga amin'ny dia manerana an'i Holland. Raha nivaingana io tanàna kely io tamin'ny taonjato faha-18, misaotra amin'ny maoderina fitateram-bahoaka, Afaka mahazo any Giethoorn avy any Amsterdam amin'ny latsaky ny ianao 2 ora.
Izahay ao Save A Train dia ho faly hanampy anao handamina fitsangatsanganana amin'ireny 10 fijanonana mahagaga any Eoropa.
Tianao ve ny hampiditra ny lahatsoratray bilaogy "Fijanonana mahagaga 10 any Eoropa" ao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Famazing-stops-europe%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
AmazingStops amazingstopseurope mijanona StopsInEurope nandeha